လမ်းသစ်(ဂေဇတ်)အထိမ်းမှတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » လမ်းသစ်(ဂေဇတ်)အထိမ်းမှတ်
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Aug 22, 2011 in How To.., Local Guides | 19 comments
လမ်းဆိုတာ တစ်လမ်းတည်း ဘယ်တော့မှ မရှိပါဘူး။
လူဆိုတာ ကိုယ်သွားနေကြလမ်းကို ပဲ ပုံမှန်အတိုင်းသွားတတ်ကြတာ ထုံးစံပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။
လမ်းသစ်တွေကို မတွေ့ခင်အထိတော့ ကိုယ်သွားနေကြ လမ်းက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ကြမှာပါပဲ။
လမ်းသစ်ကို ရှာတယ်ဆိုတာကလည်း စွန့်စားရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့ တော်ရုံလူက မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။
ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ လူ့ဘ၀မှာ ကိုယ်သွားနေကြလမ်းဟောင်းကြီးကိုပဲ အမြစ်တွယ်ပြီး သွားနေကြတဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိကြမှာပါ။ ကိုယ်သွားနေကြလမ်းမှာ အခြား သွားလို့ ရနိုင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ပိုပြီး ချောမွေ့စွာ ရောက်နိုင်တဲ့ လမ်းတွေ အများကြီး ရှိနိုင်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်
အချိန်မပေးနိုင်တာ၊ အခက်အခဲဖြစ်မှာကို ကြောက်တာကြောင့် လမ်းသစ်ကို မရှာဖွေ ဖြစ်ကြတဲ့ လူတွေ အများကြီး ရှိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လမ်းသစ်တစ်ခုကို အချိန်တစ်ခုပေးပြီး စမ်းသပ်ရှာဖွေပြီး ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ်ထင်ရင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
လမ်းသစ်ဖြစ်တိုင်းလည်း ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ အတတ်ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်မယ်ထင်ရင် ပြောင်းလဲမှုဆိုတာမျိုးက လုပ်သင့် စွန့်စားသင့်တဲ့ အရာပါ။
လူတကာ သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကိုယ်ကသင့်တော်တယ်ထင်ရင်လည်း အဲဒီလမ်းကြောင်းကို လိုက်ရသလို၊ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် လမ်းသစ်ဖောက်သင့်ရင်လည်း လမ်းသစ်ဖောက်ပြီး သွားရမှာပါပဲ။
လောကကြီးမှာ သွားစရာ လမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဓိကကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်တဲ့ လမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ရမယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ လမ်းပြောင်းသင့်ရင်လည်း ပြောင်း၊ ပြန်လှည့်သင့်ရင်လည်း လှည့် ဒါကလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေပါပဲ။
ဘာမဆို ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့  အရှင်သခင်မဟုတ်ပါလား။
ရပ်နေလို့ ခရီးလမ်းသစ် မပေါက်ဘူး၊
ဂေဇတ်ချစ်တဲ့ သူရယ် ။
လူ တွေအားလုံးအသိချင်းဖလှယ်ဖို့ 
ပွင့်လင်းစွာ အသိချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြဖို့
ဘာအရည်အချင်းတွေ ရှိရမယ်” လို့
နင် ထင်ထားသလဲ … ။
အစကတည်းက လမ်းလွဲခဲ့ကြတာ… ။
စာအုပ်ကြားထဲက ထွက်လာတဲ့…. လူ၊
စာအုပ်တွေကြားထဲ တိုးဝင်ပျောက်ကွယ်နေချင်တဲ့ …. လူ။
ဥာဏ်မှီသလောက်သာ အတွေးနဲ့ ရေးစမ်းပါရစေ၊
ငါ့ အတွေးးမှာ ဆရာကြီးဒဂုံရွှေမျှား မရှိဘူး၊
ငါ့ အတွေးမှာ ဆရာမင်းသုဝဏ်မပါဘူး၊
ငါ့ အတွေးးမှာ ဆရာမဂျူးလည်း မရှိဘူး။
ဂေဇတ်ဆို တဲ့ ရောင်စုံပန်းခင်းထဲ မှာ
ရံနံ့ သင်းချယ်ပန်းတပွင့် 
ရေလောင်းပေါင်းသင်းတဲ့ ပဲ့ ကိုင်ရှင်ဟာ
နေ့ ည မရွေ့ယနေ့ မှစ
ဂေဇတ် ရဲ့ စေတနာ
လှမ်းနေမှ ခရီးရောက်နိုင်မှာပေါ့.. ။
လမ်းသစ်အတွေးဖောက်စမ်းချစ်သူ ။ ။ ။
ဂေဇတ်သို့ July 4, 2011မှ သည်ကျနော်ဝင်ရောက်ခြင်း(တလခွဲ သားလေး)
တစ်လခွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လာရောက်ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုသွားပါတယ် ရွှေအိမ်စည်ရေ… လမ်းသစ်တွေ ဖောက်ပြီး လမ်းမှန်ကို အောင်မြင်အောင် လျှောက်နိုင်ပါစေနော်….
ဟုတ်ပါတယ် ရွှေအိမ်စည်ရေ … ကျွန်မတို့တွေ … လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့… ကြောက်နေကြတာ အမှန်ပါပဲ… ထိုင်နေလျှင် အကောင်းသား ထမှ ကြိုးမှန်းသိဆိုသလိုတွေ ဖြစ်ကုန်မှာ မို့လို့ .. ရှိရင်းစွဲ အခြေနေလေးမှာ … ဆုတ်လည်း စူး ၊ စားလည်း ရူး နေနေကြတာပါ …. ။ မဖြစ်မနေ လမ်းသစ်ဖောက်ရတော့မယ်ဆိုလျှင်တော့ … မြက်တပင်ဆုတ်မိတောင် ဖက်တွယ်ဖို့ … ကြိုးစားကြမှာပါ .. ဟုတ်တယ် ဟုတ် …
ကိုယ်ဘာသာပြောစကားနားမထောင်တတ်တာတွေ ကစမယ်ထင်ပါရဲ့ …
မြက်ဆိုတာလည်း..နွယ်အမျိုးအစားဘဲ မလို့ …..
ရှေ့ သို့ ချီ…ေ၇ာင်နီလာပြီပေါ့
လမ်းညွှန်တဲ့လူရှိတာတောင် ညွှန်တဲ့လမ်းအတိုင်းလျှောက်နိုင်ဖို့တောင် တော်တော်ကြိုးစားရတာပဲ
လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့တော့…..အင်း……မetoneပြောသလို မြက်တစ်ပင်လည်း အားပါပဲ
ရွှေအိမ်စည်ရေ …….တို့တော့ လမ်းသစ်တခါဖောက်ခဲ့ဖူးတယ် … မမေ့နိုင်စရာ တသက်တာ သင်ခန်းစာတွေလည်း ရခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ တို့ဖောက်တဲ့လမ်းလေး ပျောက်ပျက်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ အားမလျှော့ဘူး ဆုံးရှုံး သွားတဲ့ အထဲမှာ ငွေကြေးပါရင် ပါပါစေ စိတ်ဓာတ်တော့ အပါမခံနိုင်ဘူး အခုနောက်ထပ်အိမ်မက်တခုအတွက် အားမွေးပြီး ခြေကုတ်ယူနေတယ် …
ခြေကုတ်ယူပါ..လိုအပ်တာတော့အားပေးနေမယ်…..အကြံဥာဏ်နဲ့ဝမ်းနည်းလာရင်လည်း…
အောင်မြင်သူလူအများစုကလည်း သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘ၀တွေကို ကံကောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ရောက်ရှိလာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
မိုက်ရူးရဲဆန်ဆန် မျက်လုံးစုံမှိတ်စွန့်စားပြီး အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀တွေ ကိုကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးကာရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
Poohရေ … ယုံကြည်ရာကို ကြိုးစားလုပ်ပြီးမှ မအောင်မြင်လည်း အားမငယ်ပါနဲ့ … အတွေ့ကြုံတစ်ခုရတယ်လို့ သဘောထားပြီး …. ရှေ့ဆက်လှမ်းဖို့ နောက်တလှမ်းဆုတ်အားယူတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါ .. ။ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါ …. ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲနော်
မိုက်ရူးရဲဆန်ဆန် မျက်လုံးစုံမှိတ်စွန့်စားပြီး အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀တွေ ကိုကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးကာရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကောင်းတဲ့ လမ်း…တော့ ဖြစ်..ဖို့ .လို……မယ်..နော့်
ဆက် ဆက် ဆက် ဆက် ဆက် ဆက်ဆ က်
်လမ်းသစ် ဖေါက်ရမှာကို ကြောက်မိပါရဲ့…။
လမ်းဟောင်းလေး မှာပဲ ပျော်နေချင်မိတယ်…။
ရမ်းသမ်းဖေါက်မိလို့ လမ်းပျောက်မှာလဲ စိုးရသေးတယ်…။
တစ်လ ခွဲတောင်ရှိပြီလား …..
တလခွဲသားလေးက ထိုင်တတ်နေပြီပဲ။ (မမွေးခင်ကတည်းက စကားပြောတတ်နေတယ် ထင်တယ်။)
ဘေးမှာလည်း ဘော်ဒီဂတ်နဲ့။ တောင့်တောင့်တင်းတင်း အားအင်အပြည့်နဲ့ ဝင်လာတာမို့ ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ရွာကြီးဖြစ်လာရပါတယ် ရွှေအိမ်စည် ရေ-
လမ်းသစ်ဖောက်လိုက်တော့ သူတို့အမျိုး၊ သူတို့ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကိုသာ လမ်းတံတားကြေးကောက်ဖို့ ချပေးလိုက်ကြမှာပေါ့..။ (မှတ်ချက်။ သကြားစက်နှစ်လုံးကိုတောင် ယခုလက်ရှိ ၀န်ကြီးတစ်ဦးက သူ့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီကိုတစ်လ သိန်း(၃၀၀၀) နဲ့ ငှါးလိုက်ပါ၏။ DVB သတင်းမှ)
အပြင်ကတဲ တွေ တော့မဌားရပါဘူး….
သူကြီးကရွာပြင်အပေါက် ကပိုကျယ်တယ်ပြောလို့ ပါ…..